Snn Nepal णु यादवको प्रश्न : बालुवाटार धाउने ठाकुर र महतोलाई कारवाही किन नगर्ने ? – Snn Nepal
णु यादवको प्रश्न : बालुवाटार धाउने ठाकुर र महतोलाई कारवाही किन नगर्ने ?
काठमाडौ । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) भित्र सत्ता समीकरणका लागि मत विभाजित भएपछि एक अर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोपको क्रम सुरु भएको छ । यही क्रममा बरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिइसकेका छन् ।